Home Wararka Midowga Musharaxiinta oo isaga baxay Muqdisho & Farmaajo oo dardar galiyay qorshahiisa
Midowga Musharaxiinta oo isaga baxay Muqdisho & Farmaajo oo dardar galiyay qorshahiisa
Dhamaan xubnaha Midowga Musharaxiinta ayaa waxa ay isaga baxeen magalaada Muqdisho iyaga oo haatan ku sugan wadanka dibadiisa, gaar ahaan wadamada dariska la ah dalka Soomaaliya. Musharaxiinta ayaa waxa ay ku soo dhamaadeen in ay qoraalo iyo baaqyo soo saaraan, iyaga oo ku fashilmay in ay la yimaadaan aragtiyo cusub oo ay ku wajahan qorshaha Farmaajo ee doorashada.
Dhanka kale Farmaajo ayaa dhankiisa waxa uu dar-dar galiyay qorshahiisa la xiriira in uu dalka ka qabto doorasho ka tarjumeysa danahiisa gaarka islamarkaana xaqiijineysa in isaga kaliya dib loo soo doorto. Shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay niyad jab xoog leh kala soo diristay Musharaxiinta mucaaradka oo ayan talo gacantooda ku jirin.
Dhanka kale waxa isa soo taraya wararka sheegaya in MW Farmaajo iyo Fahad Yasin ay wadahadal la fureen qaar kamida musharaxiinta. Talabadaan ayaa waxa ay kala jabin doontaa xoogaga mucaaradka. Fahad Yasin ayaa horay gacanta ugu hayay musharaxiinta Cabdikarin Guleed iyo Dahir Maxamud Geele?